वादी समुदायको मागप्रति नागरिक समाजले भन्यो : माग सम्बोधन गरियोस ! – Dullu Khabar
वादी समुदायको मागप्रति नागरिक समाजले भन्यो : माग सम्बोधन गरियोस !
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०७:५९
सुर्खेत । व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै गएको सोमबारदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय गेटमा धर्ना बसिरहेका वादी समुदायको माग प्रति नागरिक समाजले ऐक्यवद्धना जनाएको छ ।
मानवअधिकार सँस्था इन्सेक, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, खाद्य अधिकार सञ्जाल, स्याक नेपाल लगाएत विभिन्न संघसँस्थाहरुले साझा रुपमा वादी समुदायको माग प्रति ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, लगाएतका जिल्लामा बसोबास गरिरहेका उनीहरु १० गते रातिदेखि खुल्ला आकाश मुनी धर्ना बसिरहेका छन् ।
नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण पत्रका भनिएको छ ,‘ संविधानको मौलिक हकमा जतिपनि हकहरुको व्यवस्था गरेको भएपनि बर्षौदेखि वादी समुदायले राज्यले ग्यारेण्टी गरेका आधारभुत अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।’
पुस्तौँ देखि पिछडीएको राज्यले दिने सेवा सुविधामा पहुँच नभएको र जीविकोपार्जनका लागि सीप र कलाो माध्यमबाट गुजार गर्ने यो समुदायले उठाएका माग सरकारले तत्काल सम्बोधन गरि समस्या समाधान लागि हामी अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सँस्थाहरु जोडदार माग गर्दछौाँ,’ पत्रका भनिएको छ ।
साथै सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकार सुनिश्चतता नहुँदासम्म समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको नाराले सार्थकता नपाउने पनि ठहर गरिएको छ ।
अनौपचारीक सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले उनीहरुको माग सम्बोधनमा सरकारले ध्यानदिनुपर्ने बताए । उनीहरु प्रदेश सरकारकै शरणमा पुगेको समयमा ४/४ दिन सम्म पनि मुख्यमन्त्री ज्युले भेट्नुभएको छैन्,’उनले भने ,‘ त्यो राम्रो पक्ष हैन्।
स–साना बालबालिकालाई समेत अनिश्चितकालीन धर्नामा बसिरहेका उनीहरुले खेती गर्ने जमिनको माग गरिरहेका छन् । तर, प्रदेश सरकार जमिन उपलब्ध गराउने कुरामा प्रतिवद्ध छैन् ।
मंगलबार बिहानै आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जमिन उपलब्ध गराउने अधिकार आफुहरु सँग नभएको बताइसकेका छन् । उनले जमिनको व्यवस्था संघ र स्थानीय तहले गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका हुन् ।
यतिमात्र हैन् मन्त्री भण्डारीले सीमित साधन श्रोतको कारण व्यवस्थापन गर्न गार्हो हुने तर्क राखेको थिए । बरु, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारिको ग्यारेण्टी लिनसक्ने उनको भनाई थियो ।
तर, वादी समुदायले भने जमिन उपलब्ध नगराए सम्म आन्दोलन गरिराख्ने बताएको छ । खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था नहुन्जेल सम्म आफुहरु नफर्कीने अडान वादी समुदायको छ ।
खुल्ला चौरमा दिउसको समय गर्मी र साँझको चिसोले गर्दा बालबालिकाहरु बिरामी समेत पर्न थालेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी दैलेखका वादी समुदाय धर्नामा
बसोबासको माग गरेका वादीसमुदायलाई प्रदेश सरकारको जबाफ : हामी जमीन दिन सक्दैनौं
Tags: वादी समुदायको माग सम्बोधन गरियोस